MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Touch & Win Lucky Draw FAQ mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
၂။ MPT4U Appကိုဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ?
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် Update Nowဆိုသော ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် (သို့) *4040# ကိုခေါ်ဆို၍လည်း အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ပြုနိုင်မှာပါ။ iOS အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မူ App Storeတစ်မျိုးတည်းမှသာ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။“နယူးထိပေါက်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများသည် MPT4U app ထဲတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မည်သည့်ပက်ကေ့ချ်မဆို အနည်းဆုံးတစ်ခါဝယ်ယူတိုင်း “နယူးထိပေါက်”ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိပါဝင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။ CDMA သုံးစွဲသူများ၊ MPT ဝန်ထမ်းများနှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် သုံးစွဲသူများသည် “နယူးထိပေါက်”ကံစမ်းမဲတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
၅။“နယူးထိပေါက်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ “နယူးထိပေါက်”ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ MPT4U app ထဲတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မည်သည့်ပက်ကေ့ချ်မဆို အနည်းဆုံးတစ်ခါဝယ်ယူတိုင်း “နယူးထိပေါက်”ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိဆော့ကစားနိုင်ပြီး Telecom prize ကံစမ်းရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ *4040# ကိုခေါ်ဆို၍ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ Telecom ဆုများစွာကို ကံထူးနိုင်မှာပါ။
Data – 20GB နှင့်အထက်
– SMS – up to 500 SMS
၇။ ဆုတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမှာလဲ?
၈။(၇)ရက်အတွင်းဆုမဲများပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုမဲများကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
အမျိုးအမျိုးသော Data ဆုများကို (၇)ရက်အတွင်းကံထူးခဲ့ပါက ထိုဆုများ၏ သက်တမ်းသည် ပေါင်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ကံထူးသောရက်မှစ၍ Telecom ဆုများ၏ သက်တမ်းမှာ သီးခြားစီတည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – ၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ကံထူးသော Data ဆု၏ သက်တမ်းမှာ ၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံကံထူးသော ၂၆.၀၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ကံထူးသော Data ဆု၏ သက်တမ်းမှာ ၀၁.၀၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းများနှင့် ဒေတာပမာဏများပေါင်းစည်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။
ကံထူးသူများသည် ဆုများကံထူးကြောင်း စာတိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်
ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကံစမ်းခွင့်ရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကံစမ်းခွင့်ရတဲ့နေ့မှာ (၁)နာရီ ကြိုတင်၍ (၂၃:၀၀:၀၀ နာရီတွင်) အသိပေးစာ
ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင်း ကံစမ်းခွင့်ရတဲ့နေ့၀၀:၀၀:၀၀ နာရီတွင် အကြောင်းကြားစာ (ကံစမ်းခွင့်ကျန်ရှိသူများသာ) များပေးပို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၂၄)ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၉)ရက်အထိ